Jabuuti oo 16 sarkaal oo Tigree ah oo soo goostay ku celisey Itoobiya (Xeer ay ku xadgudubtey) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Jabuuti oo 16 sarkaal oo Tigree ah oo soo goostay ku celisey...
Jabuuti oo 16 sarkaal oo Tigree ah oo soo goostay ku celisey Itoobiya (Xeer ay ku xadgudubtey)
(Jabuuti) 06 Nof 2020 – Jabuuti ayaa Itoobiya u gacan gelisey 16 sarkaal oo ka tirsan Ciidanka Tigreega ee TPLF, kuwaasoo ay gacanta ku dhigeen Ciidanka Ilaalada Jamhuurigu kaddibna ay su’aalo waydiiyeen Sirdoonka Jabuuti ee SDS oo uu hoggaamiyo Hassan Said Khaireh.
Saraakiishan oo Jabuuti magangelyo waydiistey ayaa la sheegayaa inay Jabuuti soo galeen Talaadadii kaddib markii ay DF Itoobiya ay weerar ku qaadday Gobolka Tigraay oo dowladda dhexe isku taagayey bilihii dambe.
Saraakiisha ayaa Arbacadii loo duuliyey Itoobiya iyadoo lagu sido dayuurad xamuul ah oo ay leeyihiin Ciidanka Cirka Jabuuti.
Saraakiishan la gacan geliyey ayaa Dowladda Jabuuti ka baryey in aan la celin iyagoo soo hadal qaaday Cahdiga Geneva ee la saxiixay 1951-kii oo diidaya in dadkan lagu celiyo dalka ay kasoo carareen.
Previous article”Gabadheenna waxaa la geeyey Galdogob oo ay ku gaajoonayso!” – Qoys Hindi ah oo ka cowday nin Soomaali ah oo gabar ka qaba
Next article”Haddaan runta kuu sheego Soomaalidu agtayda ”SUMCAD” kuma laha!” – Wasiirka Casriyaynta Norway oo furka ku xooray fal lagula kacay gabar Soomaali ah